Asi Obi Yiye Anaa Wabrɛ Agu?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Dɛn na Ɛkyerɛ sɛ Asi Obi Yiye?
DƐN na ɛyɛ yaw sen sɛ wobɛbiri wo mogya ani ayɛ adwuma bi na anyɛ yiye? Ɛyɛ ɔbrɛguo. Sɛ woyɛ biribi na anyɛ yiye a, wobɛtumi afa kwan foforo so asan ayɛ ama ayɛ yiye. Sɛ woansua biribi amfi mu mpo a, wode nea ɛsii no bɛtu wo ho fo.
Nanso ɔbrɛguo deɛ ɛnte saa; wobrɛ gu a woabrɛ agu. W’adwene bɛyɛ wo sɛ ade a woreyɛ no bɛyɛ yiye nanso ɛrenkɔsi hwee. W’ani bɛba wo ho so no, ebia na aka akyi dodo.
Wo deɛ yɛnyɛ ho nhwɛso. Bere bi Yesu Kristo bisae sɛ: ‘Sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne kra a, mfaso bɛn na ɔbɛnya?’ (Mateo 16:26) Saa asɛm yi, ɛfa nnipa bi ho; wɔn a wɔbiri wɔn mogya ani pɛ sika ne ahonyade no. Yɛreka ɔbrɛguo a, ɛho nhwɛso paa ni. Onimdefo bi a yɛfrɛ no Tom Denham kaa sɛ: “Obi ma adwumam dibea ne sikapɛ gye n’adwene nyinaa, na ɔfom wiase ahonyade a, ɛremma ɔnnya akomatɔyam. Sɛ ɛyɛ wo sɛ sika na ɛbɛma asi wo yiye a, ɛnde wonnim nea worekeka; wo nsa bɛsi fam.”
Nea yɛreka yi, nnipa pii gye tom. Nnipa bi a wɔyɛ nhwehwɛmu bisabisaa nkurɔfo nsɛm wɔ United States. Dodow no ara kae sɛ apɔwmuden, asomdwoe ne adwuma pa na ɛma ɛsi obi yiye. Nnipa kakraa bi na ɛkaa sika ho asɛm.
Enti nnipa bebree no ara, sɛ wobisa wɔn a, wɔbɛtumi akyerɛ nea ɛma ɛsi obi yiye ne nea ɛma obi brɛ gu. Nanso sɛ́ wɔbɛsi wɔn adwene pi ayɛ nneɛma a ɛbɛma asi wɔn yiye no, ɛno deɛ ɛyɛ den.